Iyo prototype yeiyo iPhone 6 ndiko kutsamwa kwese pa eBay | IPhone nhau
Iyo iPhone 6 prototype ndeyehasha dzose paBay
Kuti Apple inoshandisa prototypes kuyedza mashandiro ayo iPhone yayo isati yaburitswa chimwe chinhu isu tese chatinoziva chaizvo. Kwete izvozvo chete, asi chimwe chinhu chakasimbiswa naTim Cook, sezvaakaita mushumo yemaminiti makumi matanhatu, kwaakaratidza zvimwe prototypes zveiyo iPhone 60. Zvichakadaro, izvo zvisina kujairika, kuona zvimwe zvezviratidzo izvi panze iyo Cupertino dzimbahwe. Muchokwadi, inguva yechipiri kuti izvi zviitike, zvakatoitika munguva yeiyo iPhone 6s, izvo zvakakonzera kutemwa nemusoro kwakakomba kuna Steve Jobs nechikwata chake chemagweta, kuti vadzore zvigadzirwa zvavo. Iyo iPhone 6 prototype yakaiswa muEbay uye iri kukanganisa mhirizhonga.
Iyo peculiarity yeiyi iPhone haisi chete kuti haina yakajairwa kumashure mamaki pasi pemusoro unoti "iPhone", asi zvakare kuti ine yekukanganisa-proofing software, inonzi naApple switchchBhoard. Sezvatakambotaura, haina chero yemhando dzeFCC, asi chinhu chakanakisa ndechekuti, ndechekuti kana iwe uchinyanya kufarira kutora kwayo, enda unogadzirira mari, nekuti iyo okisheni iri kutoenderera. kweanopfuura madhora zviuru zvishanu yeiyi isinganzwisisike iPhone 6 yekuongorora modhi.
Haizove iyo inodhura kwazvo iPhone yakambotengeswa, asi imwe yeanonyanya kushamisa. Chokwadi ndechekuti ndinorarama zvirinani ndisina mamaki eFCC, ndinovimba rimwe zuva mamaki acho anogona kuvanzwa. Hatigone kuona serial nhamba kana IMEI yechigadzirwa futi, saka vanogona kunge vachiverevedza kopi yekunyepedzera, asi inotaridzika kunge yechokwadi. Chigadzirwa, sezvatareva, hachimhanye iOS asi ChinjanaBoard, saka hazvibatsiri, kupfuura kuyedza kwekuita kweiyo hardware mukati.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone Concepts » Iyo iPhone 6 prototype ndeyehasha dzose paBay
Inoenda $ 60.100
Uye chinongedzo ?? Nei idzi nhau dzisina chinongedzo?
kwete zvachose xD
Iyo nyowani MacBook Pros ichabatanidza Kubata ID uye OLED skrini
Pebble 2 uye Pebble Nguva 2, smartwatches nyowani ekambani